Cisbitaalka Cadaado oo lagu soo kordhiyay qeyb cusub “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Qaybtan cusub ee lagu soo kordhiyay cisbitaalka dhexe ee magaalada Cadaado ayaa loogu talagalay Hooyada iyo Dhallaanka, waxaana maanta xariga ka jaray Guddoomiyaha golaha Baarlamanka Maamulka Ximan iyo Xeeb, iyadoo munaasabadda ay ka qayb galeen madaxda maamulka, bahda caafimaadka iyo ururrad bulshada.
Guddoomiyaha degmada Cadaado Cabdullahi Cabdiraxmaan “Tootoole” ayaa sheegay in mashruucan oo ka koobnaa 13-qol iyo 8-musqul ay fuliyeen maamulka degmada oo kaashanaya Hay’adaha ku bahoobay JPLG, isagoo intaa ku daray in mashaariic kalena ay ka fulin doonaan magaalada Cadaado.
Dr Maxamed Cumar Yuusuf Agaasimaha cisbitalka dhexe ee magaalada Cadaado ayaa sheegay inay aad ugu baahnaayeen qaybtan balse qalabaynteedu ay harsantahay, isagoo ku baaqay in la fududeeyo qalabka uu cisbitaalka u baahan yahay.
Guddoomiyaha golaha Baarlamanka maamulka Ximan iyo Xeeb Cabdullahi Faarax Sandheere ayaa maamulka degmada ku amaanay waxbqabadka muuqda ee uu sameeyay iyo sida musuq maasuq la’aanta ah ee mashruucan uu u maamulay.
Mashruucan lagu balaariyay qaybta Hooyada iyo Dhallaanka ee cisbitalka dhexe ee Cadaado ayaa qayb ka ah mashaariicada sanadkan laga hirgelayay magaalada Cadaado.
War-saxaafadeed Maamul wanaag iyo la dagaallanka Musuq maasuqa